Home Wararka Ansixinta sharciga Hanti Dhowrka oo dood kulul ka socoto golaha BJFS
Ansixinta sharciga Hanti Dhowrka oo dood kulul ka socoto golaha BJFS
Xildhibaanadda Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dood adag oo ku saabsan sharciga Hantidhowrka qaranka ku leh xaruntooda Muqdisho.
Sharcigan ayaa maraya akhrinta saddexaad oo ah marka ugu dambeysay, waxaana la filayaa in Gollaha Shacabka uu maanta go’aan ka gaaro, ansixin ama diidmo midkood.
Sharciga oo ay soo diyaarisay wasaarada Maaliyadda ayaa dib loogu celiyay mar hore, oo ay wax ka bedal kusoo sameysay, xili ay kusoo wareejisay Guddiga maaliyadda ee Aqalka Hoose oo Gollaha Shacabka horkeenay maanta.
Xildhibaanada ayaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan dooda la xiriirta wax ka bedalka sharciga, kaasi oo qodobo dhowr ah ay su’aal geliyaan, kuwaasi oo ay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in bidhaamiyo.
Fadhiyadii looga dooday akhrinta koowaad iyo labaad ayay sharci-dejiyaashu ku doodeen in wasaaradu qodobo aan loo baahneen kusoo dartay sharciga, inkasta oo aanan la hubin hadii laga soo saarey qodobadaasi.
Xubnaha wakiilada rayidka ayaa lagu wadaa in marka ay soo dhamaato dooda iyo akhrinta saddexaad ay cod geliyaan sharciga si uu unoqdo mid dhaqan-gal xili aanan laga hor-dhici karin natiijada coddeynta.
Previous articleShaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud oo Muqdisho lagu dilay
Next articleDowladda Federaalka oo khilaaf ba’an ka dhex abuurtay doorashada KG
Somaliland oo dib uga bilaawday Gobolka Sanaag raafka dadka ka soo...
Saciid Deni oo kala diray Golihii Degaanka magaalada Boosaaso (Wareegto)